We Fight We Win. -- " More than Media ": လျှပ်စစ်မီး ၂၄-၇ ရရှိရေး လှုပ်ရှားမှု သတင်း
လျှပ်စစ်မီး ၂၄-၇ ရရှိရေး လှုပ်ရှားမှု သတင်း
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ( ပြည်မြို့) 24.May 2012 တတိယမြောက်နေ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ၂၄နာရီလျှစ်စစ်မီးရရှိရေး ဆန္ဒပြမိဘပြည်သူများအား အာဏာပိုင်များမှ စတင်ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြောဆိုချက် - “လျှပ်စစ်မီး မရရှိမှုကြောင့် ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုများကို သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ဆန္ဒပြသူတွေက လျှပ်စစ်မီးကို အရင်ပေးပါ၊ ဒီမိုကရေစီကို နောက်မှ ပေးပါလို့ ပြောဆိုတာတွေက ကျမစိတ်ထဲမှာ ဘ၀င်မကျပါဘူး။ လျှပ်စစ်မီးတွေ မှန်မှန် မရတာဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ အားလုံးကို သေသေချာချာ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
which asia tiger country at south east asia has 100% democracy?
if our country became like singopore,thailand.malaysha,thats enought.These countries have no 100% democracy.U talked Democracy,thats why we voted u.U have to do to get democracy.when u can not do it,u said i cant do it alone,if u want to get change,doit ur self.U r fucking idiot.
Thats why we vote u and ur party.U have to do for Democracy.What u did 888?Just talking whole 20 years.
What we have to do for Democracy?U give no order